“Lugahaan kaa jabin doonaa haddaad mar dambe ii goyso.”. Sheeko YAAB iyo QOSOL leh!! | Allsomaliland
“Lugahaan kaa jabin doonaa haddaad mar dambe ii goyso.”. Sheeko YAAB iyo QOSOL leh!!
dhaliyaha Manchester City Gabriel Jesus ayaa ka sheekeeyay dhacdo qabsatay markii uu yaraa oo uu kubbada cagta ku soo korayay taa oo isugu jirta Qosol, Yaab iyo Naxdinba.
20-jirka weerarka kaga ciyaara Pep Guardiola ayaa ku jira qaab ciyaareed aad u shidan isagoona dhaliyay ilaa iminka sideed gool isla markaana caawiyay labo kale.
Laakiin wiilka reer Brazil ay kubbadiisa ka soo bilaabatay wadooyinka Sao Paulo ayaa ka sheekeeyay in xitaa lagu dili gaaray farsamadiisa sarreeysay aawadeed.
“13-jirkeygii, waxaan bilaabay inaan rag waa wayn kula ciyaaro Várzea,” Jesus ayaa sidaa Sheekadiisa ku bilaabay.
“Ok – qofkasta oo jooga São Paulo wuu garanayaa waxa aan iminka ka hadlayo sida cadna waxay bilaabayaan inay durba qoslaan. laakiin si uu qofkasta u ogoaado waan idin sharaxayaa.
“Várzea waa sida wado lagu ciyaaro Basketball ee ku taala America, ama horyaalada aan la aqoonsaneyn ee Yurub. waxaa jiray shaqaale aad qabiid u ah oo garoonka soo galaya.
“Waxaa jira waqti aan marna ilawi doonin…kulan aad u muhiim ah ayaan la ciyaareynay kooxdan wayn.
“Markasta waxay ahaayeen mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Várzea, laakiin sanado ayay horyaalka uga maqnaayeen sababo aan dooneyn inaan ka hadlo waayo waxaa la arkaa inay caruur iminka aqrinayaan sheekadan.
“Wuxuu ahaa sanadkii ugu horreeyay ay dib ugu soo laabtaan horyaalka, waxayna innaga nala ciyaarayeen kulan loogu gudbayo koob wayn.
“Waan xusuustaa dhammaan ciyaartoydooda aniga ayay i soo fiirinayeen kulanka ka hor, iyagoo malaha is oranaya ‘Muxuu yahay canunga yar? Ma dhab-baa?
“dhab ayay ahayd.
“Afar daqiiqo aan garoonka ku jiray waxaan u gooyay daafacooda ugu fiican waxaana ka dhaliyay gool, waana xusuustaa iyaga inay dhammaan isoo eegayeen sida iyagoo is leh ‘Ok, canugaagan nolosha ayaan Jaxiimo kaaga dhigi doonnaa.
“Waxay bilaabeen inay i jafaan markasta aan kubbada taabto. ilaa xad way isla waasheen- sida inay dhabtii doonayeen inay i dhaawacaan. Midkan gaaban ee qadka dhexe kaga ciyaara kooxdooda ee ku caanka ahaa inuu dadka dhaawaco kana cabsiiyo ayaa igu cel celinayay. ‘Lugaha ayaan kaa jabin doonaa hadaad isku daydo inaad mardambe ii goyso/gambiso.
“Kubbadii ayaan helay markale ayaan u gooyay.
“Waxaan ahaa sida mid ciyaaraya NBA, waxaan ka jabiyay canqowyadiisa dhinac ayaan goysmo ugu riday.
“Way isoo wada fiirinayeen sida inay dhabtii doonayeen inayba i dilaan.
“Laakiin maxaan dhihi karaa? Marka ay kubbada lugteyda ku jirto duni kale ayaaba joogaa. Sidaa darteed kubbada ayaan markale helay Baas aan la eegeyn meesha la dhigayo ayaan saaxiibkey u dhigay oo gool u badelay.
“Taageerayaashii ayaa isla waashay.
“Kulanka ayaa ku dhammaaday 2-2, Rigoorayaal ayaana ku adkaanay, kii dagaalka badnaa ayaa ii yimid oo igu yiri. ‘Waan kuu sheegay canugyahoow inaan lugaha kaa jabin doono. Meesha baabuurta la dhigto ayaan kugu arki doonaa.
“Dhab ayay ka ahayd, waxaan xusuustaa inaan ka fikirayay sida aan halkan ugu bixi lahaa, nasiib wanaag saaxiibadeyda kooxda ayaa i ilaalinayay, dhammaan ayaa isku key hareereeyay waxayna i geeyeen halka baabuurta la dhigto dhib la’aan, nabad ayaana ku tagay guriga.”.